Kenya oo dib u bilowday baarista dhul-badeedkii ay isku hayeen Somalia. | Hargeysa World~Herald
Kenya oo dib u bilowday baarista dhul-badeedkii ay isku hayeen Somalia.
KenyaKenya oo dib u bilowday baarista dhul-badeedkii ay isku hayeen Somalia.
(Arbaca 11 Jan 2022)– Kenya ayaa xoojisey sahanka saliid iyo gaas ay ka baarayso agagaarka Lamu Basin todobaadyo uun kaddib markii ay diiddey xukunkii Maxkamadda ICJ.
Madaxa Wakaaladda Batroolka, James Ng’ang’a, ayaa sheegay in shirkadda shidaalka Talyaaniga ah ee ENI (Ex Agip) qaybteeda Kenya ee ENI Kenya Business Venture (BV), ay sahanka dib u bilowday bishii hore, gaar ahaan ceelka Mlima-1 oo sidoo kale loo yaqaan Block L11B.
Shirkadda ENI ayaa lagu wadaa in kaddib sahankeeda ay natiijada soo saarto labada bilood ee soo aaddan, iyadoo howsha oo ay dib u bilowday 28-kii Diseembar lagu wado inay socoto muddo 2 bilood ah, sida uu Mr Ng’ang’a u sheegay Business Daily.
Tan iyo Abriil sanadkii tegey, Kenya ayaa sawirid iyo calaamayn ku haysey dhul-badeedka Lamu Basin oo la rumaysan yahay inuu shidaal badani ceegaago, taasoo ah aag isku xira Somalia-Kenya, ilaa Tanzania.
Somalia ayaa Maxkamadda ICJ gaarsiisey dacwadda dhul ku fadhiya 100,000 oo KM oo jibbaaran oo ay ka buuxaan gaas, saliid iyo macaadin kale bishii Agoosto 2014-kii, waxaase bishii Oktoobar la xugmiyey in dhulka intiisa badan ay leedahay Somalia.
Yeelkeede, Kenya oo horay u sheegtay in aanu go’aankaasi khusaynin ayaa meesha ay iminka baaraysaa aanu ahayn baloogyada jira dhanka Somalia, balse waa arrin u baahan in isha lagu hayo.